Mudanayaal iyo waxgarad soo dhaweeyay baqii nabadeed ee madaxweynaha maamulka K/galbeed – Radio Muqdisho
Mudanayaal iyo waxgarad soo dhaweeyay baqii nabadeed ee madaxweynaha maamulka K/galbeed
Mudanayaal ka tirsan Baarlamanka oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay baqii nabadeed ee madaxweynaha maamulka koofur galbeed u jeediyay beelo walaalo ah oo ku dagaalay deegaano ka tirsan gobolka Sh/Hoose.
Xildhibaannadan oo ah guddi ay dowladda dhexe iyo maamulka Koofur galbeed u xilsaareen joojinta colaad ka jirtay gobolka Sh/hoose ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen ku soo dhaweeyay baaqii nabadeed ee madaxweynaha maamulka Koofur galbeed iyo xabad joojinta ka dhaqan gashay beelaha ku dagaalamay gobolka Sh/hoose.
Odayaasha dhaqanka ee beelaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose oo ka qeybgalay kulanka guddiga xildhibaanada ah ayaa ballan qaaday iney ka shaqeyn doonaan nabadda, ayna soo dhaweynayaan baaqa madaxweynaha maamulka koofur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Sidoo kale odayaasha labada dhinac ee kulanka ka qeybgalay ayaa si isku mid ah u ballan qaaday iney si shuruud la’aan ah u qaateen xabad joojinta uu ku baaqay Shariif Xasan.
Xildhibaan Siciid Maxamed Cali oo kulankaasi ka hadlay ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsanyahay kaalinta uu Shariif Xasan ka qaadanayo bakhtinta colaaddii ka oogneyd gobolka Sh/Hoose.